Baasaboorka Soomaaliga oo ka awood badan qaar ka mid ah baasaboorada caalamka - Jowhar somali news leader
Henley & Partners ayaa soo saartay qiimeyntii ugu horeysay ee 2022, waxayna ka dhigtey dalalka Japan iyo Singapore labaduba inay yihiin kuwa ugu sarreeya awooda baasaboorada caalamka.
Labadan dal ee ku yaal Aasiya waxay leeyihiin galaangal bilaash ah ama fiisaha markay yimaadaan 192 goobood, in kasta oo taasi aanay xisaabta ku darsanayn dhammaan xannibaadaha safarka ee masiibada socota awgeed.
Germany iyo South Korea labadooduba waxay ku soo xigaan kaalinta labaad oo leh 190. Iyadoo ku xiran sida aad rabto inaad u akhrido qiimeynta, Australia waxay la wadaagtaa booska toddobaad, oo ay weheliso Canada, Czech Republic, Greece iyo Malta.
Muwaadiniinta halkan ku nool waxay heli karaan fiis la’aan kaliya 26 waddan. Ciraaq iyo Suuriya ayaa ah inta soo hartay saddexda ugu hooseeya halka dalka Soomaaliya qofka haysta baasaboorkiisa uu ku tegi karo illaa 34 dal fiiso la’aan.
Qiimeynta Henley Passport Index waxay isticmaashaa xogta Ururka Gaadiidka Cirka ee Caalamiga ah cabirkeeda, oo daboolaya 199 baasaboor iyo 227 goob safar.
Somaliland oo diiday tirada laga siiyay xujeyda sanadkan,…
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka hadlay wararka sheegaya in loo…
Waxaana qiimeyntan markii ugu horreysay la daabacay 17 sano ka hor, iyadoo soo koobidda natiijooyinkii ugu dambeeyay ay xustay farqiga sii kordhaya ee gelitaanka safarka tan iyo markaas.
Sannadkii 2006-dii, celceliska waddamada la booqan karo iyadoon fiisaha hore loo helin waxay ahayd 57. Sannadkii 2022-kii, celceliska waddanku wuxuu gaaray 107 waddan.
Qiimayntan ayaa lagu sameeyay Baasaboorada 193 wadan oo xubnaha ka ah Qaramada Midoobay iyo lix dhul.
Tobanka dal ee ugu awoodda badan leh baasabarada caalamka iyo dalalka lagu tegi karo.
1. Japan, Singapore (192 dal)
Tobanka dal ee ugu awoodda yar Baasaboorada caalamka iyo dalalka lagu tegi karo.
104. North Korea (dal)
Mahad 4818 posts
Wasaaradda Arrimaha Dibbada oo ku guuleysatay xallinta caqabad haysatay Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan
Somaliland oo diiday tirada laga siiyay xujeyda sanadkan, iyagoo u dacwooday…
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka hadlay wararka sheegaya in loo magacaabay Xilka…
Xisbiyada mucaaradka ah oo Muuse Biixi ku eedeeyay fashilka shir looga hadlayay…